Evolution Ọ na -ewepụta Fan Tan & Nweta DigiWheel
Evolution Ọ na -ewepụta Fan Tan, na -aga n'ihu na -enwe akara ukwu & na -enweta DigiWheel
Ọ bụ Anette dere
E bipụtara na September 20, 2021
Mbido > Akụkọ & Edemede > Evolution Ọ na -ewepụta Fan Tan, na -aga n'ihu na -enwe akara ukwu & na -enweta DigiWheel
Evolution bụ otu n'ime ndị mmepe nke egwuregwu ndị na -ere ahịa ndụ. N'ime afọ ole na ole gara aga, ụlọ ọrụ ahụ amụbaala akara ukwu ya, mee ọtụtụ nnweta dị mkpa, gụnyere ịzụrụ NetEnt, ma gbasaa Pọtụfoliyo nke live casino ọdịnaya.
Companylọ ọrụ ahụ gara n'ihu na-aga n'ihu, na-eme ka ọnọdụ ahịa ya sie ike ma na-echekwa ọdịnaya ya dị elu nke ọma ma na-amasị ndị ahịa n'ụwa niile. Taa, anyị ga -atụle EvolutionIhe mmegharị ọhụụ, nke edobere idobe onye na-ebubata ya n'elu nke na-eto n'ike n'ike live casino nke.
Fan Tan na -akụ ahịa
Evolution gbasaa ya nso live casino utu aha site na ibido ụdị ndụ egwuregwu bọọlụ Asia a ma ama Fan Tan.
Egwuregwu ochie a na -eji nkewa chaplet ugboro ugboro, nke dome iko kpuchie ya na mbụ. Ozugbo ịkụ nzọ amalite, onye nnabata ahụ ga -eji iko ọla kọwaa nọmba beads. A na -ahazi chaplet niile ahọpụtara n'ime ahịrị anọ. Onye na -ere ahịa na -eji osisi pụrụ iche mee ya ruo mgbe ahịrị ikpeazụ nke beads ga -afọdụ. A na -etinye ahịrị a n'etiti okpokoro, ebe ebumnuche onye ọkpụkpọ ahụ bụ ịkọ ọnụ ọgụgụ ikpeazụ nke beads fọdụrụ.
Agbanyeghị na ama ama n'oge gara aga, a na -echefu Fan Tan taa. Site n'inye ya ọgbara ọhụrụ live casino ighikota, Evolution chọrọ ịkwanyere ya ugwu. Dabere na Todd Haushalter, onye isi ndị ọrụ ngwaahịa na Evolution, ọgbọ ọhụrụ nke ndị egwuregwu ga -enwe ohere igwu egwuregwu a.
Evolution rụtụrụ aka na ndị egwuregwu baccarat ga -ahụrịrị Fan Tan n'anya nke ukwuu, n'ihi na ọ na -anọchite anya mgbakwunye na -atọ ụtọ na egwuregwu a ma ama.
Tupu ọnwa a, Evolution enwetara DigiWheel, onye ama ama na -emepụta wiil egwuregwu na -agbagharị agbagharị. Nkwekọrịta ego niile gụnyere ịkwụ ụgwọ n'ihu million 1 nde, ebe ịkwụ ụgwọ ọzọ ga-adabere na DigiWheel's EBITDA ihe karịrị afọ atọ. Dị ka ozi dị, nnweta a ga -agwụcha na njedebe afọ.
Ntugharị ahụ kwesịrị ịkwalite ya EvolutionPọtụfoliyo site na ikwe ka ụlọ ọrụ jiri teknụzụ ọhụrụ DigiWheel rụọ ọrụ n'ime live casino Egwuregwu egwuregwu na ihe ngosi egwuregwu. EvolutionAhịrị n'ahịrị etinyelarị ọtụtụ aha ama ama dabere na wiil, gụnyere Dream Catcher na Crazy Time.
Evolution mara ọkwa na ya abanyela nkwekọrịta iji nweta azụmahịa DigiWheel.
DigiWheel ga -esonyere ụdị ndị ọzọ na -arụ ọrụ n'ime Evolution Otu. Na mgbakwunye na Evolution, ndepụta gụnyere aha ndị ama ama dị ka NetEnt, Red Tiger, Big Time Gaming na Ezugi.
Ngwa flagship DigiWheel bụ wiil egwuregwu HD, na -agbagharị n'ụzọ zuru oke na ogo 360, na -arụ ọrụ dị ka faịlụ live casino egwuregwu, na -agba ọsọ egwuregwu wheel ọ bụla si EvolutionPọtụfoliyo.
N'otu oge ahụ, Evolution na -aga n'ihu ịgbasa ọnụnọ ya n'ahịa n'ofe ụwa.
Na September, Evolution banye na nkwekọrịta SunBet ka ọ gaa biri na South Africa. Ndị ahịa nọ na obodo a ga -enwe ohere ịnụ ụtọ ahịrị dị ukwuu nke egwuregwu ndị na -ere ahịa ndụ onye nrụpụta. Mana enwere ihe ndị ọzọ, dịka nkwekọrịta ahụ gụnyere Pọtụfoliyo Ezugi.
Ọdịnihu yiri ka ọ na -ekwe nkwa Evolution, ka ụlọ ọrụ ahụ na -ezube ịkwalite ụkwụ ya na US. Na mgbakwunye na studio Michigan ewepụtara n'oge na-adịbeghị anya, Evolution na -elekwasị anya n'ọtụtụ steeti US, ọkachasị Illinois, Indiana, na Virginia. Ebe Connecticut akwadolarị iwu online ịgba chaa chaa, Evolution na -achọ ịga biri ebe ahụ n'oge mgbụsị akwụkwọ a.
N'inwe ọtụtụ steeti na -akwado inye ndị bi na ha ịgba chaa chaa n'ịntanetị, Evolution ga -adị njikere ịbawanye ọnụnọ ya. Agbanyeghị, ikike ọhụrụ na -atọ ụtọ na North America adịghị na US kama na Canada agbata obi. Site na ọnụ ọgụgụ ndị bi nde iri na ise, ógbè Ontario buru ibu karịa ahịa ịgba chaa chaa n'ịntanetị ugbu a na US. N'oge a, Evolution na -arụkọ ọrụ ọnụ yana ọtụtụ ndị ọrụ nwere mmasị ịme azụmahịa na Ontario ma na -atụ anya ịnye ọdịnaya ya na ikike a na njedebe nke afọ.
Oge na -atọ ụtọ na -abịa n'ihu Evolution, nke na -aga n'ihu idowe onwe ya dị ka onye isi aha azụmahịa. Site na pọtụfoliyo na-arịwanye elu nke egwuregwu ndị na-ere ahịa ndụ, ngwakọta ngwa ahịa na atụmatụ nnweta, na ịgbasawanye akara ukwu ya zuru ụwa ọnụ, ụlọ ọrụ ahụ ga-anọrịrị n'isi ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa n'ịntanetị. Anyị na -atụ anya ịhụ ihe ọdịnihu ga -adịrị onye nrụpụta ama ama.
N'ebe a ị nwere ike igwu egwuregwu ndị na -ere ahịa ndụ site na Evolution
Ọzọkwa Dị Mma Gụọ